တရုတ်ရှန်ဒေါင်း Oree လေဆာ - စက် OR-S ကဖြတ်တောက်ခြင်းမူလစာမျက်နှာအသုံးပြုမှု Fiber လေဆာ
CO2 လေဆာရှုး & လုပ်သော
CO2 လေဆာ Cutter & ကမ္ပည်းထိုးလုပ်ငန်း
စက်ဖြတ်တောက်ခြင်းချိန်းပလက်ဖောင်း Cutter Fiber လေဆာ ...
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Fiber laser ဖြတ်တောက်ခြင်း machine OR-P ကို
မူလစာမျက်နှာအသုံးပြုမှု Fiber စက်ဖြတ်တောက်ခြင်းလေဆာ OR-S က
Dual-အသုံးပြုမှုစာရွက် & Tube Fiber laser ဖြတ်တောက်ခြင်း MACHI ...
မူလစာမျက်နှာအသုံးပြုမှုကိုဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက် designed for small-scale work. This metal fiber laser cutting machine is the best choice for home use. The whole fiber laser cutters with the safety protection cover, PMI screw drive, precision cutting. It hasasmall footprint and can meet the metal cutting of the home.
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်စွမ်း: တစ်လလျှင် 250 သတ်မှတ်မည် / သတ်မှတ်ပေးသည်
ဆိပ်ကမ်း: ရှန်ဟိုင်း / NINGBO / Qingdao
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: L / CD / အေဒီ / PT / T က
နှစ်ခုကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရွယ်အစားအတွက် 1.Available: * 900mm 1300 နှင့် * 1000mm 1500;
ထိရောက် 2.Energy: သတ္တုဖြတ်တောက်ဘို့နိမ့်ဆုံးပြေးကုန်ကျစရိတ်;
လျင်မြန်တိကျသောဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက် 4.Closed ကွင်းဆက် servo မော်တာ / ဘောလုံးကိုဝက်အူ;
5.Low ပါဝါသရေကျ (2kw ထက်လျော့နည်း);
7.Programmable ဖြတ်တောက်ခြင်းဓာတ်ငွေ့ solenoid ကူညီရန်;
8.1070nm ဖိုင်ဘာလေဆာသတ္တုဖြတ်တောက်ဘို့အတွက် CO2 ၏ 3x 10x ဖို့စုပ်ယူထိရောက်မှုရှိပါတယ်;
9.Laser (အဘယ်သူမျှမကြေးမုံကိုထိန်းညှိဖို့) တစ်ဖိုင်ဘာ optic cable ကိုအတွင်းအပြင်ပါရှိသောလျက်ရှိ၏
10.6um CO2 အမျိုးအစားလေဆာရောင်ခြည်ထက် 10.10x ငယ်များအစက်အပြောက်အရွယ်အစား;
11.Solid ပြည်နယ်လေဆာ 50,000hrs ကျော်ကြာ;
2kw မှ 500W ကနေ 12.Various ပါဝါရွေးချယ်စရာ;
13.Easily 6mm ကာဗွန်သံမဏိ, 3mm စွန်ခံ, 2mm လူမီနီယံ (500w) မှတဆင့်လျှော့ချနိုင်သည်။
သို့ကာစ်လူမီနီယမ်ဆာရောင်ခြည်မြင့်မားတဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုခိုင်ခံ့တည်ငြိမ်မှု, အလင်းအလေးချိန်, မြန်နှုန်းမြင့်, ခိုင်ခံ့ထိတ်လန့်ခုခံ, ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, 170 မီတာ / မိနစ်အများဆုံးမြန်နှုန်းရှိပြီး; 1.5, G အရှိန်; လေဆာရောင်ခြည်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်
လျှပ်စစ် device ကိုပရိသတျအားအားနည်းလျှပ်စစ်ခွဲခြာ, ဘုတ်အဖွဲ့်ရောက်စွက်ဖက် minimize; ထိန်းသိမ်းထားဖို့လွယ်ကူပါတယ်, ကောင်းသောအပူလွန်ကျူး, ဖုန်မှုန့်-သက်သေပြ, Anti-ငြိမ််ရောက်စွက်ဖက်
ဆွစ်ဇာလန် RAYTOOLS 2017 ခုနှစ်တွင်စတင်အလတ်စားနှင့်မြင့်မားသောပါဝါစက်မှုဇုန် application များအတွက်ကြောင်းသင့်လျော်သောဖိုင်ဘာဖြတ်တောက်ခြင်းခေါင်းကိုထုတ်လုပ်ထိုသို့ dustproof ဒီဇိုင်းနှင့်ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုအတွက်ပြည့်စုံ optimization ကိုပြု၏။
စတိုင်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသွင်အပြင်, ဥရောပကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစံချိန်စံညွှန်းများ, fiber optic အကာအကွယ်ဖန်တောက်ပ filter နှင့်မျက်စိအားကာကွယ်ရန်နိုင်ပါတယ်။
အလုပ်လုပ်ဧရိယာ 1300 * 900mm 500X600mm 1500X1000mm
နေရာချထားခြင်း၏တိကျမှန်ကန်မှု ± 0.02mm ± 0.02mm ± 0.02mm
မက်စ် Acceleration 60 / မိနစ် 60 / မိနစ် 60 / မိနစ်
X / Y-ဝင်ရိုး repositioning တိကျမှန်ကန်မှု ± 0.01mm ± 0.01mm ± 0.01mm
အများဆုံး Acceleration 1G 1G 1G
လေဆာပါဝါ 500W, 800W, 1000W, 1500W, 2000W 500W, 800W, 1000W, 1500W, 2000W 500W, 800W, 1000W, 1500W, 2000W
ယခင်: Dual-အသုံးပြုမှုစာရွက် & Tube Fiber laser ဖြတ်တောက်ခြင်း machine OR-FT
နောက်တစ်ခု: Tube Fiber laser ဖြတ်တောက်ခြင်း machine OR-T က
ပုံစံ OR-S က 1309 OR-S က 1510
အလုပ်အဖွဲ့ဧရိယာ 1300 * 900mm 1500 * 1000mm
လေဆာပါဝါ 500w / 800w / 1000w / 1500w / 2000w / 3000w
ရှုထောင့် (L ကို * W * H ကို) * 1700mm * 2200 2000 * 1700mm * 2400 2100
အလေးချိန် 1500kg 2000kg
ထပ်ခါတလဲလဲနေရာချထားတိကျပြတ်သားမှု ± 0.02mm
နေရာချထားခြင်း၏တိကျမှန်ကန်မှု ± 0.03mm
မက်စ်။ လပ်ြရြားမြမြန်နှုန်း 40 / မိနစ်
မက်စ်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်း 35m / မိနစ်
မက်စ် Acceleration 0.6G
သတ်မှတ်ထားသောဗို့အားနှင့်ကြိမ်နှုန်း 380V / 50Hz / 60Hz / 60A (စိတ်ကြိုက်)
Fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း 1000w
စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း Fiber လေဆာ 1000w
1500 * 3000mm Fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
လေဆာ Cutter 2000w
2000w လေဆာ Cutter 1500 * 3000mm
3mm သံမဏိလေဆာ Cutter
အလွိုင်း Fiber လေဆာ Cutter
အလွိုင်း Fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
CNC fiber လေဆာ Cutter
စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း CNC laser
ကြေးနီ Fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
Desktop ကိုလေဆာ Cutter
လေဆာ Cutter 2000w ဖိုင်ဘာ
ဖိုက်ဘာလေဆာ 500 Watt ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
ဖိုက်ဘာလေဆာ Cutter 1000w
စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း Fiber လေဆာ
သံမဏိသည်လေဆာ Cutter စက်
လေဆာ Cutter စက်များ
လေဆာ Cutter စျေး
စက် Fiber 1000w ဖြတ်တောက်ခြင်းလေဆာ
လေဆာ Fiber ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
သတ္တု Fiber လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း စက်
သတ္တု Fiber သံမဏိလေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
Tube Fiber laser ဖြတ်တောက်ခြင်း machine OR-T က
ကြော်ငြာခြင်း Fiber laser ဖြတ်တောက်ခြင်း machine OR-PT
FLATBED Fiber laser ဖြတ်တောက်ခြင်း machine OR-F ကို
အလယျပိုငျးစာရွက် Fiber laser ဖြတ်တောက်ခြင်း machine OR-FM ရေ
EXCHANGE TABLE စာရွက် & Tube Fiber laser Cu ...
ပြပွဲ၏အစမ်းကြည့်ခြင်း: Oree Laser wil ...
အသစ်စက်စက် Oree၊ 40mm သံမဏိ ...
နေရပ်လိပ်စာ: NO.19-1, Jiyang လမ်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များပန်းခြံ, Jinan, တရုတ်က CP: 251400
E-mail ကို: sales@oreelaser.com
©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2014: All Rights Reserved ။